NBA App 9.0619 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.0619 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား အားကစားမ်ား NBA App
NBA App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့အဖွဲ့။ သင့်ရဲ့ဂိမ်း။ သင့်ရဲ့ NBA ။ တရားဝင် NBA app ကိုအတူယခုအချိန်တွင်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။
အမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်းက-ယခုအရင်ကထက်တိုက်ရိုက်ဂိမ်းနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများကိုလိုကျနာဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူ၏တရားဝင် App နဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပျေါလှငျ, ရမှတ်များ, စာရင်းများနှင့်သတင်းနှင့်အတူဂိမ်း၏ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့!
- ပင်မမျက်နှာပြင် - သငျလိုကျနာအဆိုပါအသင်းများနှင့်ကစားသမားများအတွက်ဂိမ်းနောက်ဆုံးသတင်းများ, replays, သတင်းနှင့်စာရင်းဇယားမှလျင်မြန်စွာလက်လှမ်း
- ဂိမ်း-ခုနှစ်တွင်နဲ့ post-ဂိမ်းပျေါလှငျ
- ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာ - သင့်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများနှင့်ကစားသမားကိုခြေရာခံဖို့တိုးတက်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများ
- တိုင်းအသင်းကနေဂိမ်းနေ့က updates များကိုအပါအဝင် NBA န်းကျင်မှအများဆုံးဗီဒီယိုများ
သင့်ရဲ့ဘတ်စကက်ဘောပြင်ဆင်ချက်ရရန်လုံလောက်သည်မဟုတ်လော ငါတို့သည်သင်တို့ NBA လိဂ် Pass ကို-ရှည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ NBA ဂိမ်းအားလုံးရာသီစောင့်ကြည့်ဖို့အဆုံးစွန်လမ်းနှင့်ဖုံးလွှမ်းတယ်ပါတယ်။
- Up ကိုအသကျရှငျနဲ့ဝယ်လိုအား (အပြည့်အဝ-အရှည်နှင့်နို့ဆီ replays) ရက်နေ့တွင် NBA ဂိမ်း 1200+ မှ *
- သင်ကြည့်ရှုချင်သောလမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့အကွိမျမြားစှာအထုပ် options များ
- မိုဘိုင်း-Optimized Views: မိုဘိုင်းကြည့်ရန်နှင့်အတူသင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက်လုပ် watch ဂိမ်းစီး
- စပိန်, ပေါ်တူဂီ, ကိုးရီးယား, အဘိဓါန် Mandarin-, ထိုင်း, ဂျပန်အတွက်ဂိမ်းကို Select လုပ်ပါ
- အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့ Download - အကြာတွင်စောင့်ကြည့်ဖို့ဂိမ်းများကို Download လုပ်ပါ
- NBA မော်ကွန်း - ဂန္ဂိမ်းများ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း၏ 60 ထက်ပိုသော-ကျော်မှနာရီ Access ကို!
- NBA တီဗီ - သီးသန့် features တွေ, အင်တာဗျူးနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ၏ 24 နာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီး **
ကနေဒါ, တရုတ်, ပြင်သစ်, ဟောင်ကောင်, အီတလီ, ဖိလစ်ပိုင်, စပိန်, ဘာမြူဒါ, ဂူအမ်ကျွန်း Puerto Rico, ယူနိုက်တက်စတိတ်အမေရိကန်ပြင်ပကျွန်းများအမေရိကန်ဗာဂျင်းကျွန်းများတွင် ** NBA တီဗီကိုမရရှိနိုင်
လက်ရှိ NBA လိဂ် Pass ကို subscriber များအား app ကိုသို့ logging အားဖြင့်၎င်းတို့၏ subscription ကိုရယူနိုငျပါသညျ။
NBA လိဂ် Pass ကိုဝယ်ယူရန်နှင့်သင်သည်သင်၏စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်သည်အထိသငျသညျအလိုအလြောကျ iTunes ကိုမှတဆင့်တိုင်းရက်ပေါင်း 30 (လစဉ် packages များ) သို့မဟုတ်တိုင်း 365 ရက် (နှစ်စဉ် packages များ) ငွေကောက်ခံပါလိမ့်မည်။ subscriptions ကို activated ခဲ့ကြပြီးနောက်ပြန်အမ်းရရှိနိုင်မရှိကြပေ။
သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများကြုံတွေ့ရပါကထောက်ပံ့မှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ် support.watch.nba.com သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
NBA App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
NBA App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
NBA App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
NBA App အား အခ်က္ျပပါ
appstv စတိုး 44.2k 84.88M
NBA App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း NBA App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.0619
ထုတ်လုပ်သူ NBA Properties, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.nba.com/news/privacy_policy.html
Release date: 2019-08-07 16:42:08
လက်မှတ် SHA1: 9D:1B:1A:C8:28:E0:47:72:A7:34:91:D8:39:D9:85:2B:80:C4:66:92
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Xiaodong Wang
အဖွဲ့အစည်း (O): Neulion Inc
NBA App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ